28.02 Jeso sy ny demonia
MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY
Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.
Anio Alarobia 28 Febroary 2018 dia ny Lioka 8.26-39, no sakafom-panihintsika ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? Misy teny fampaherezana na teny fikasana omen' ny Tompo ahy ve ? ary farany inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
26 Dia nitody tany amin’ ny tanin’ ny Gerasena izay tandrifin’ i Galilia izy.
27 Ary raha niala nankeny an-tanety Jeso, dia NIFANENA taminy ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna, izay efa nanana demonia, ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano, fa teny amin’ ny fasana.
28 Fa nony nahita an’ i Jeso izy, dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin’ ny feo mahery hoe : Moa mifaninona akory izaho sy Hianao, ry Jeso, Zanak’ Andriamanitra Avo Indrindra ô ? masìna Hianao, aza mampijaly ahy.
29 Fa Izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dralehilahy. Fa efa nahazo azy ela izany; ary efa nafatotra tamin’ ny gadra, na ny tanany, na ny tongony, ka nambenana izy; nefa notapahiny ny fatorana, ka dia nentin’ ny demonia niriotra nankany an'efitra izy.
30 Ary Jeso nanontany azy ka nanao hoe : Iza moa no anaranao ? Dia hoy izy : Legiona; fa demonia maro no efa niditra tao anatiny.
31 Ary nifona taminy izy mba tsy handidiany azy hankany amin’ ny lavaka tsy hita noanoa.
32 Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. Dia nekeny.
33 Ary ny demonia, rehefa nivoaka tamin-dralehilahy, dia niditra tao anatin’ ny kisoa; ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva tamin’ ny hantsana ho any amin’ ny farihy, ka dia maty tany.
34 Ary nony hitan’ ny mpiandry izany natao izany, dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha.
35 Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao izany; ary tonga tany amin’ i Jeso izy, dia nahita an-dralehilahy izay efa nivoahan’ ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilan’ ny tongotr’ i Jeso nitafy lamba sady ary saina; dia raiki-tahotra ireo.
36 Ary izay efa nahita dia nanambara tamin’ ny olona ny namonjena an’ ilay demoniaka.
37 Ary ny olona rehetra tany amin’ ny tanin’ ny Gerasena manodidina dia nangataka an’ i Jeso hiala aminy, satria raiki-tahotra indrindra izy; ary Jeso niondrana an-tsambokely ka niverina.
38 Ary ny lehilahy izay efa nivoahan’ ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy; nefa nampodin’ i Jeso izy ka nataony hoe :
39 Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’ Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka NITORY eran’ ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’ i Jeso taminy.
Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.
JESO SY NY DEMONIA
Jeso Kristy irery ihany mifanandrina amin’ny demonia marobe, legiona (30), miaramila 3.000 hatramin’ny 6.000 izany eo amin’ny tafika Romana.
Kanefa nivarahontsana teo anatrehan’i Jeso izy ireo ka nifona sy nivalo hoe : ”Ry Jeso Zanak’Andriamanitra avo indrindra ô ! Aza mampijaly anay” (28b).
Ary talohan’io aza dia efa niankohoka teo anatrehany ireo demonia ireo (28a).
Fantatrin'ny devoly tsara ny herin’i Jeso sy ny fahefany amin’ny maha zanak’Andriamanitra sady Andriamanitra Azy ka afaka handefa azy ireo any amin’ny lavaka tsy hita noanoa.
Izany rahateo no efa voalaza manao hoe : ”Izao no nisehoan’ny zanak’Andriamanitra dia ny handrava ny asan’ny devoly” (1Jaona 3.8b)
Fangatahan’ny demonia nekena.
Nangataka tamin’i Jeso ireo demonia mba tsy ho any amin’ny lavaka tsy hita noanoa no handefasana azy fa mba ho any amin’ireo kisoa andiany ary dia nanaiky izany fangatahany izany i Jeso (31-32).
Afaka tamin’ny gadra.
Ilay tovolahy nampahorian’ireo demonia kosa dia afaka soa aman-tsara ka na dia naniry hanaraka an’i Jeso aza izy dia nirahiny kosa hanambara amin’ny olona rehetra ny nanafahan’Andriamanitra azy tamin’ny gadrany ary dia nataony izany.
Raiki-tahotra ny mponina.
Fa ny mponina tao Gerasena na Gadarena kosa dia raiki-tahotra tamin’ny fahitana izany asa lehibe nataon’i Jeso izany.
Inona re no antony ?
Noho ireo kisoa andiany marobe very fotsiny ve ?
Sa ny fahagagana mihitsy no nahavalalanina azy ireo ?
Manao ahoana ny toe-ponao
eo anatrehan’ny fahagagana asehon’i Jeso eo amin’ny fiainanao
sy ny manodidina anao isan'andro ?
Fiderana sa tahotra ?
Hamaranantsika itý Mana androany itý dia hivavaka ho an'ny manam-pahefana isan-tokony sy isam-baratongany isika.
Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy, na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve ?
Mpiara-Mamaky ny Baiboly - Mana Isan'Andro
" Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao "